Gulen oo Cambaareeyey Amarka Lagu Soo Xirayo - iftineducation.com
iftineducation.com – Wadaadka Turkish-ka ah ee fadhigiisu yahay Mareykanka Fethullah Gulen ayaa cambaareeyey waraaq amar oo lagu soo xirayo oo shalay laga soo saaray dalka Turkiga, ayada oo lagu eedeynayo inuu abaabulay afgambigii dhicisoobay ee dalkaas.
“Waa wax hore loo diiwaan geliyey in hanaanka cadaalladda Turkiga uu yahay mid aan madaxbanaaneyn, sidaa darteedna amarka cusub ee xarig waa tusaale muujinaya kali-talisnimada Erdogan ee ka fogaanshaha dimoqraadiyadda” ayuu ku yiri Gulen bayaan uu soo saaray.
“Warqad la isugu soo xiray ee laga soo saaray Turkiga waxba kama badaleyso xaaladeyda” ayuu yiri Gulen.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in Gulen oo saaxiib hore la ahaa madaxweyne Erdogan, uu afgambiga la abaabulay saraakiil milatari, waxayna dowladda Mareykanka ugu baaqday in lasoo masaafuriyo.
Gulen ayaa beeniyey inuu ku lug lahaa afgambiga ama uu ka warhayey inta uusan dhicin ka hor 15-kii July ee sanadkan.
Madaxweynaha Turkiga, Reccep Tayyip Erdogan ayaa shalay sheegay in dowladdiisa ay “ka go’an tahay in jarto dhammaan xiriirada ganacsi ee kooxdan oo gacmaha dhiig kula jirta”.
Waxa uu sidoo kale sheegay “in lacag kasta oo gasha kooxda Gulen ee FETO ay ka dhigan tahay xabad lagu soo riday qaranka”.